Fiangonana iray vao teraka - Church of God Switzerland of the World
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Fiangonana, teraka indray
Tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ny Fanahy Masina dia nitahy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany tamin'ny fitomboan'ny fahatakarana ny fotopampianarana sy ny fahatsapana an'izao tontolo izao manodidina antsika, indrindra ireo Kristiana hafa. Saingy ny halehiben'ny haingam-pandeha nanomboka ny nahafatesan'ny Herbert W. Armstrong, izay nanorina ny mpanohana sy ny mpanohitra. Ilaina ny mijanona ny mieritreritra momba izay resy sy ny zavatra azontsika.
Ny finoantsika sy ny fanaontsika dia niharan'ny dingan'ny fandinihana mitohy teo ambany fitarihan'ny Mpitandrina jeneraly Joseph W. Tkach (raiko), izay nandimby an'Atoa Armstrong teo amin'ny toerany. Talohan’ny nahafatesan’ny raiko dia notendreny ho mpandimby azy aho.
Feno fankasitrahana aho noho ny fomba fitarihana mifototra amin'ny ekipa izay nampahafantarin'ny raiko. Feno fankasitrahana ihany koa aho noho ny firaisana teo amin'ireo izay nijoro teo aminy ary nanohy ny fanohanan ahy rehefa manaiky ny fahefan'ny Soratra Masina sy ny asan'ny Fanahy Masina isika.
Tsy eo intsony ny firentsika amin'ny fandikana ara-dalàna ny Testamenta Taloha, ny finoantsika fa Great Britain sy Etazonia dia taranaky ny vahoaka Israeliana "British Israelism", ary ny fanamafisantsika fa ny antokom-pivavahantsika dia manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Tsy ao intsony ny fanamelohana antsika amin'ny siansa ara-pitsaboana, ny fampiasana makiazy ary ny fialantsasatra kristiana nentim-paharazana toy ny paska sy krismasy. Ny fiheverantsika hatry ny ela fa Andriamanitra dia fianakavian'ireo fanahy tsy tambo isaina izay ahafahan'ny olombelona teraka ao dia nolavina, nosoloin'ny fomba fijery marina ara-Baiboly ny Andriamanitra iray izay nisy hatramin'ny mandrakizay tao amin'ny olona telo, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. .
Isika izao dia manaiky sy manohana ny foto-kevitra ivon'ny Testamenta Vaovao: ny fiainana, ny fahafatesany ary ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty. Ny asa fanavotana nataon’i Jesosy ho an’ny olombelona izao no ifantohan’ny bokintsika lehibe indrindra, The Plain Truth, fa tsy ny fanombantombanana ara-paminaniana momba ny andro farany. Ambarantsika ny fitsitsiana feno ny sorona solon’ny Tompontsika mba hamonjena antsika amin’ny fanamelohana ho faty noho ny ota. Mampianatra ny famonjena amin’ny alalan’ny fahasoavana miorina amin’ny finoana fotsiny isika, ka tsy mitodika amin’ny asa na inona na inona. Fantatsika fa ny asa kristianina ataontsika dia mahaforona ny valin-kafatra aingam-panahy sy feno fankasitrahana ny asan’Andriamanitra ho antsika - “Isika tia, satria Izy efa tia antsika voalohany” (1. Jao. 4:19) - ary amin’ny alalan’ireo asa ireo dia tsy “mahamendrika” ny tenantsika amin’ny zavatra rehetra isika, ary tsy manery an’Andriamanitra hifona ho antsika. Araka ny voalazan’i William Barclay hoe: “Voavonjy ho amin’ny asa tsara isika, fa tsy amin’ny asa tsara”.
Ny raiko dia nanambara ny fotopampianaran'ny Soratra Masina tamin'ny Fiangonana fa ny Kristianina dia eo ambanin'ny Fanekempihavanana Vaovao fa tsy ny Taloha. Io fampianarana io dia nitarika antsika handao ny fepetra teo aloha - dia ny fitandremana ny Sabata amin'ny andro fahafito ho fotoana masina, fa ny kristiana dia tsy maintsy mitandrina ny fepetra takin'ny olona isan-taona amin'ny andro fahafito. 3. ary 5. Nandidy ny andro firavoravoana fanao isan-taona i Mosesy, fa tsy maintsy nanome ampahafolon-karena telo ny Kristianina, ary tsy tokony hihinana sakafo noheverina ho maloto teo ambanin’ny fanekena taloha ny Kristianina.
Izany fiovana rehetra izany ao anatin'ny folo taona monja? Betsaka ny milaza amintsika ankehitriny fa ny fanitsiana lalim-paka amin'ity halehibeazana ity dia tsy misy fitoviana ara-tantara, farafaharatsiny hatramin'ny andron'ny Fiangonan'ny Testamenta Vaovao.
Ny mpitarika sy ny mpikambana mahatoky ao amin'ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia mankasitraka tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitondrana antsika ao amin'ny mazava. Saingy tsy nisy vidiny ny fandrosoantsika. Nihena be ny fidiram-bolan'ny vola very, an-tapitrisany dolara no nanjavona ary voatery nampandeha ny mpiasa efa an-jatony maro izahay. Nihena ny isan'ireo mpikambana. Fiara maro no namela anay hiverina tany amina toeran'ny fotopampianarana na kolontsaina teo aloha. Vokatr'izany dia nisaraka ny fianakaviana ary nafoina ny fisakaiza, indraindray miaraka amin'ny hatezerana, mandratra ny fahatsapana sy ny fiampangana. Tena malahelo izahay ary mivavaka fa hanome fanasitranana sy fampihavanana Andriamanitra.
Ny mpikambana dia tsy nasaina hanana porofom-pinoana momba ny zavatra inoantsika vaovao, ary tsy nantenain'ny mpikambana hampiasa an-dry zareo ny finoanay vaovao. Nasongadinay fa mila finoana an'i Jesoa Kristy manokana isika, ary efa nandidy ny pasiteranay mba hanana faharetana amin'ny mambra ary hahatakatra ny fahasaritan'izy ireo amin'ny fahatakarana sy ny fanekena ireo fanovana fotopampianarana sy ny fitantanana.
Na dia eo aza ny fatiantoka ara-materialy, dia nahazo betsaka izahay. Araka ny nosoratan’i Paoly, na inona na inona nahasoa antsika tamin’izay nasehontsika teo aloha, dia heverintsika ho loza izao noho ny amin’i Kristy. Mahazo fampaherezana sy fampiononana isika amin’ny fahafantarana an’i Kristy sy ny herin’ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiombonana amin’ny fijaliany, ka hitovy amin’ny fahafatesany sy hitsanganany amin’ny maty isika (Filipiana). 3,7- iray).
Mankasitraka an'ireo Kristiana namany izahay - Hank Hanegraaff, Ruth Tucker, David Neff, William G. Brafford, ary namanay ao amin'ny Oniversite Pazusa Pacific, Seminary Fuller Theological Seminary, Regent College, sy ny hafa - izay naninjitra ny tanantsika teo amin'ny fiaraha-monina rehefa mandeha isika miezaka mafy hanaraka an'i Jesoa Kristy amin'ny finoana. Raisinay ny fitahiana fa isika dia ampahany tsy fandaminana ara-batana irery ihany, fa an'ny Vatan'i Kristy, vondrom-piangonana izay fiangonan'Andriamanitra, ary afaka manao izay azonay atao manampy amin'ny fanampiana ny filazantsaran'i Jesoa Kristy. ny mizara izao tontolo izao.
Joseph W. Tkach raiko nanolo-tena amin'ny fahamarinan'ny Soratra Masina. Niatrika fanoherana dia nanizingizina izy fa i Jesosy Kristy no Tompo. Mpanompo an'i Jesosy Kristy nanetry tena sy mahatoky izy, izay mamela an'Andriamanitra hitarika azy sy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany amin'ny haren'ny fahasoavany. Amin'ny fiantohana an'Andriamanitra amin'ny finoana sy ny vavaka amin-kafanam-po, ny tanjontsika dia hitazona hatrany ny lalana nampanaovin'i Jesosy Kristy antsika.